Hot springs နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(2/5)
Hot spring resorts and towns are scattered all across Japan. Because these locations have thrived as tourism destinations since ancient times, you’ll findanumber of great sightseeing spots gathered around them as well, including traditional inns and eateries as well as museums and theme parks.
ဟိုကိုင်းဒိုး ခမိရှိဟိုရောချော၏ နုကပိန်းဖုကန်တွင်ရှိသော ကွန်ကရစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်းကုးတံတား။ နုကပိန်းဖုကန် ၏ ရေသည်တိုးလာသည် ဇွန်...
အာခိတခရိုင် နယူတိုးတောင်ခြေမှာ စွတ်ရုရေပူစမ်း၊ တာအဲနိုရေပူစမ်း၊ ခုရိုယုရေပူစမ်း၊ ဂါနိဘရေပူစမ်း၊မာဂိုရိုခုရေပူစမ်း၊ အိုးခမရေပူစမ်း အပန်ြးေ...
မျက်နှာပြင်ဧရိယာ ၈၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိပြီး ဂျပန်မှာ ၆ ခုမြောက် အကျယ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ခါရုဒဲရရေကန်က ဂျပန် အကြီးဆုံး ရေကန်ပါ။ အနီးဝန်းကျင်မှာ...
နိုဇာဝရေပူစမ်း ပြင်ပရေပူစမ်းလည်ပတ်ခြင်းက နိုဇာဝရေပူစမ်းရဲ့ ရေပူစမ်းလမ်းမှာ တည်ရှိတဲ့ ၁၃ ရေပူစမ်းကို လည်ပတ်တာဖြစ်တယ်။ ပြင်ပရေပူစမ်းက ရွာသာ...
အနီးအနားတွင် ဆူပွက်ထွကနေသော ရေပူစမ်းသည် မီးတောင်ဟောင်းနေရာတွင် ရှိနေသော ရွံ။ ဖြစ်ပေါ်လာသောရေနွေးငွေ့ နှင့် ထူးခြားသော ဆာလဖာ အနံမှ ( ဂျိေ...
ရို့ ခိုတောင်ရဲ့ မြောက်ဘက်တောင်ခြေမှာ ရှိတဲ့ ( ဂျပန်ရှေးရေပူစမ်း ၃ ခု ) ရဲ့ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အနှစ် ၁၄၀၀ သမိုင်းသက်တမ်းရှိပြီး တိုင်းခိုးဟိဒဲ...
နာတိုရိမြစ်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ရေစီးမှုက ကျောက်ကမ်းပါးကို တိုက်စားသလို စီးဆင်းပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ တောင်ကြားဖြစ်တယ်။ နော်ဇိုခိတံတားကို ဗဟိုပြုပြီ...
ရေတံခွန်ရေကျသည့်အမြင့် ၃၀ မီတာ၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၆၀၀ မီတာခန့် ရှိသော ရေတံခွန်ဖြစ်ပြီး ဘီအဲအိမြို့ ၏ ရှိရောဂနဲရေပူစမ်းအုပ်စုထဲတွင် ရှ...
ကြီးမားသော မြောက်အက်ပ်တောင်စဉ်တန်းများ၏ သဘာဝဖြင့် ဝန်းရံထားသော ခုရောဘဲဆည်သည် ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါသည်။ ရှု့ ခင်းကြည့်...
ကမ္ဘာမှာ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ ရေပူစမ်းမှာ စိမ်တဲ့ မျောက်တွေရှိတဲ့ အကြောင်းကြောင့် နာမည်ကြီးတယ်။ အရင်ဆုံး ရေပူစမ်းစိမ်ခဲ့တာက မျောက်ကလေး တစ်ကောင်...